के हो स्लीप एपनिया ? यस्ता छन् लक्षण र बच्ने उपाय | Kendrabindu Nepal Online News
के हो स्लीप एपनिया ? यस्ता छन् लक्षण र बच्ने उपाय
१७ श्रावण २०७७, शनिबार १२:५१
स्लीप एपनिया अर्थात निद्रासँग जडित एक गम्भिर बिरामी । स्लीप एपनिया भएको अवस्थामा, हाम्रो निन्द्रा कयौं पटक टुुट्छ । धेरै पटक सास समेत रुक्न सक्छ । स्लीप एपनिया भएको खण्डमा हामी कयौं पटक कोल्टे फेर्छौं । देशको १३ प्रतिशत जनसंख्या अवरोधक स्लीप एपनियाबाट ग्रस्त छन् । तथ्याङ्क अनुसार यो पुरुषमा १९.७ प्रतिशत त्यस्तै, महिलाहरुमा ७.४ प्रतिशत रहेको छ । स्लीप एपनिया भएको स्थितिमा, एक घण्टामा तीस वा यसभन्दा पनि बढी पटक, सास फेर्न वा कोल्टे फेर्ने अवस्था आउन सक्छ । यो एक यस्तो विकार हो जसले निद्रासँग सम्बन्धित थप समस्याहरू समेत निम्त्याउन सक्छ ।
उदाहरणको लागि यदि तपाइँको रातको निद्रा एक घण्टाभन्दा पनि कम भयो भने अर्को दिन तपाइँको सतर्कता ३२ प्रतिशतसम्म कम हुन सक्छ । स्लीप एपनिया बुझ्नु अघि हामीले निद्रा बुझ्नु आवश्यक छ । वास्तवमा, हाम्रो निद्रा तीनदेखि चार चक्रमा पूर्ण हुन्छ । प्रत्येक चक्र करीव पाँच चरणहरुबाट पूर्ण हुन्छ । चौथो चरण सबैभन्दा गहिरो निद्रा हो । पाँचौं चरण वा ¥यापिड आई मुभमेन्टको चरण हो । यो त्यस्तो चरण हो जहाँ हामी सपना पनि देख्छौ । निद्राको समयमै हाम्रो शरीरमा विकास हार्मोनहरू प्रवाह हुन्छन् । जसले शरीरको दैनिक कार्यहरू पूरा हुन्छन् । निद्राको समयमा शरीरको तापक्रम कम हुन्छ । मुटुको गति र रक्तचापमा समेत कमी आउँछ, जसले गर्दा मुटुलाई आराम मिल्छ ।
स्लीप एपनियामा धेरैपटक निद्रा गुम्न सक्छ । जसले यी सबै प्रक्रियाहरूलाई अवरोध पु¥याउँछ । अमेरीकाको यु एस नेशनल लाइब्रेरी अफ मेडिसिनको अनुसन्धान अनुसार कोभिड १९ को यस माहामारीका बेला निद्रा एपनियाको जोखिम झनै बढ्न सक्छ ।
स्लीप एपनिया भनेको के हो ?
यो एक प्रकारको निद्रा विकार हो । केहि मानिसहरू ढाडको भरमा मात्र सुत्दा, घाँटीको स्वतन्त्र मांसपेशीहरू गुरुत्वाकर्षणको प्रभावले घाँटीको पछाडिको हिस्सामा फैलन्छ । यसका साथै निद्राको शिथिलतामा रोग श्वास नलीको बीचमा तानिन्छ । यस प्रवाहबाट वायु प्रवाह आंशिक वा पूर्णरूपमा रुक्न सक्छ । यसले फोक्सोमा अक्सिजनको कमी निम्त्याउँछ । मस्तिष्कले केवल दस सेकेण्डको लागि यो अभावलाई सहन गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा दिमागले निद्रा बिच्छेद गर्दछ । यसरी निद्रा टुक्रने बित्तिकै श्वासप्रश्वासको बाटो फेरी खुल्छ । पटक पटक निन्द्रा लाग्ने र टुट्ने ब्रेकडाउनको यस चक्रलाई स्लीप एपनिया भनिन्छ ।
यसको प्रमुख लक्षण के कस्ता छन् त ?
-घुर्नु यसको प्रमुख लक्षण हुन सक्छ । सुत्न गाह्रो हुन सक्छ, मुख सुक्ने हुन्छ ।
-निन्द्राकै समयमा केही समयको लागि सास रोकिन सक्छ ।
-सास फेर्न कठिनाई हुँदा अचानक निद्रा खुल्न सक्छ ।
-बिहानको समयमा टाउको दुख्नु, दिनमा भने अधिक निन्द्रा लाग्नु ।
स्लीप एपनियाले तपाईंको पुरै स्लीप साइकललाई बिगार्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा चिडचिडाहट हुन सक्छ । यसका साथै एकाग्रता घट्न सक्छ ।
स्लीप एपनियाको कति प्रकार छन् ?
सेन्ट्रल : यो तब हुन्छ जब हाम्रो मस्तिष्कले सासको मांसपेशीहरूलाई निर्देशन दिन असमर्थ हुन्छ । यसले सासको प्रक्रिया रोक्दछ ।
अब्सट्रक्टिव : दिमागले मांसपेशीहरूलाई सास फेर्न निर्देशन दिन्छ, तर वायुमार्गमा कुनै अवरोधका कारण मांसपेशीहरूलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ ।
मिक्सड : जब दुबै सेन्ट्रल र अवरोधक निद्रा एपनिया एक साथ हुन्छ भने यसलाई मिश्रित स्लीप एपनिया भनिन्छ । यो गम्भीर अवस्था हो ।
स्लीप एपनियाको उपचार के हो ?
अवरोधक स्लीप एपनियाको लागि उत्तम उपचार सीपीएपी (लगातार सकारात्मक एयरवेज दबाव) उपचार मानिन्छ । यसको मद्दतले सासबाट लिइने वायुको चापलाई सास फेर्न वायुमार्ग खुला राख्न प्रयोग गरिन्छ । यो एकदम सस्तो र प्रभावकारी हुन्छ । यद्यपि यसको स्थायी उपचारका लागि सर्जरीको प्रयोग गरिन्छ । तर यो धेरै महँगो हुन्छ । यसमा केही जोखिमहरू पनि हुन सक्छन् ।
स्लीप एपनियाको खतरा के कस्ता छन् ?
स्लीप एपनिया एक खतरनाक स्वास्थ्य समस्या हो । यसले गम्भीर हृदय रोगहरू र पक्षघात जस्ता गम्भीर रोगहरू निम्त्याउन सक्छ ।
घुर्नुसँग यसको के सम्बन्ध छ ?
घुर्नु स्लीप एपनियाको लक्षण हुन सक्छ । तर स्लीप एपनिया नभएका पनि घुर्न सक्छन् ।
Prevटेलिकमको विषयलाई लिएर विकास समितिमा सांसदहरु आक्रोशित (भिडियाेसहित)
पाल्पाकाे ऐतिहासिक भगवती जात्रा काेराेनाका कारण स्थगितNext